ရဟန်းတော်များသည် ထွက်ရပ်ပေါက်လေဟန်၊ သိဒ္ဓိပြီးလေဟန်၊ အများပြည်သူအထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ဟန်ထုတ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ရဟန်းတော်များသည် ထွက်ရပ်ပေါက်လေဟန်၊ သိဒ္ဓိပြီးလေဟန်၊ အများပြည်သူအထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ဟန်ထုတ်ခြင်း
ရဟန်းတော်များသည် ထွက်ရပ်ပေါက်လေဟန်၊ သိဒ္ဓိပြီးလေဟန်၊ အများပြည်သူအထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ဟန်ထုတ်ခြင်း
Posted by maungmoenyo on Nov 29, 2011 in Buddhism | 18 comments
ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ။ ဒိကိစ္စကမနေ့ကပြီးသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်သံဃနာယကအဖွဲ့ကြီးရဲ့ (၄၇)ပါးစုံညီ အစည်းအဝေးမှာ၊ တညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ သတိပေးတားမြစ်ချက်တွေပါ။ အဲ့ဒီအပြင်ဒီကိစ္စတွေပါပညတ်လိုက်ပါတယ်။
– ဒါယကာ/မ များအထင်ကြီးအောင် ထင်ယောင်ထင်မှား အစွမ်းအစရှိသယောင်ဟောပြောခြင်း။
– ဒေါသ၊ မာနကြီးခြင်း။
– ဗေဒင်၊ ဆေးကု၊ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်၊ အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့များစီရင်ခြင်း၊ ချဲထီအစရှိသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
– လာဘ်ပါသကလက်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ကိစ္စများ။
– မြှူဆွယ်ဖြားယောင်၍ ကိစ္စပြီးမယောင် ထင်ယောင်ထင်မှား လုပ်ခြင်း။ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုပြောဟောပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
– ကိလေသာတရားနှင့် ၀ိနည်းနှင့်မညီညွတ်သော အကြံအစည်အပြုအမူ ပြုလပ်ခြင်း။
မောင်မိုးညို မနေ့ကသတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်မျက်စိကိုယ်မယုံနိုင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ခုတလော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးတိမ်တောင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ခြေလှမ်းသွက်လာနေတဲ့ကြားထဲက၊ ဒိသတင်းထွက်လာတော့ တော်တော်အံ့သြသွားသလို၊ စိတ်ချမ်းသာစရာ သာသနာသန့်စင်ရေး ခြေလွမ်းတခုအနေနဲ့ အဖြစ်မြင်လိုက်မိပါတယ်။ ကြိုဆိုမိလိုက်ပါတယ်
ဒီကနေ့ ဘာသာရေးလောကမှာ (ဗုဒ္ဓဘာသာတင်မကပါဘူး။ ခရစ်ယန် နဲ့ မူစလင်ရော၊ ကက်သလစ်ဘာသာတွေမှာ) ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မျာူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်မှုတွေက မမြင်ချင်မကြားချင်အဆုံးဖြစ်လာနေပါတယ်။ မြန်မာဘုန်းကြီးတွေထဲမှာလဲ မဖုံနိုင်မဖိနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်သူ။ ဘယ် media ကမှာ မထိရဲလို့ ဒီကိစ္စတွေကသိသာသိစေမမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကျူးလွန်ချက်တွေ ပါတဲ့စာရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ မောင်မိုးညိုအပါအ၀င် စာဖတ်ကြသူ အပေါင်းတို့က ကိုယ်ဘုန်းကြီးကရောဒီလိုပညတ်တွေနဲ့ ကင်းရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ သံသယတွေ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဆိုတာတွေးကြည်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကထိပ်ဆုံက စဖေါက်လို့ ဖြစ်ကြရတာပါ။ ဘုန်းကြီးရောတကာတွေမှာပူးတွဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ ခုတော့ ဒီကိစ္စတွေထိထိရောက်ရောက်လုပ်တော့မဲ့ပုံပါဘဲ။ ပွဲပြီးမီးသေမဟုတ်ဘဲ၊ သာသနာတခုလုံးမှာတပြေးညီ အရေးယူဆောင်ရွက်လာနိုင်သည်နဲ့အမျှ၊ ဗုဒ္ဓသာဿနံစီရံတ္ထိထု ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါ။
အဲဂလို လုပ်ရပ်လုပ်သူ သံဃာတော်များကို သံဃာဟု မခေါ်ပါကြောင်း
(စောင့်ထိန်းရပါသည့် ဝိနည်းတော်များ ဖြင့်မနေပါသော သံဃာ)
တစ်ကယ်ကြီးလုပ်တော့မှာလား …။ ဟီးး နေ၀န်းနီတို့ က လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး ၀ိနည်းနဲညီတဲ့ ဆြာတော်တွေ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရတော့မှာပေါ့…။ ပျော်ဂျာကြီး ဂျာ….။ ဖစ်တင့်ဒါကျာပေါ့
အဲ.လိုတားမြစ်ချက်တွေ ထုတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ် နောက်မို. ဆိုအကျင့်ပျက် သံဃာတော်တွေ ကိုတွေ.မြင်နေရတာစိတ်မချမ်းသာပါဘူး သူတို.တော.ဘယ်လိုနေလဲမသိပါ မြင်ရတဲ.သူတွေအတွက်တော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်
ကောင်းတယ်ဟေ့ ကောင်းတယ်ဟ…နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလည်းဟောသေး မိမိကိုယ်ကို
ဒေါသ မောဟ မာန်မန မထိန်းနိုင်မှတော့သေချာတွေးကြည့်ရင်အင်မတန်မှရှက်ဘို့ကောင်းပါတယ်။….
ဘုန်းကြီးတောင်အင်း အိုင် လက်ဖွဲ့ တွေပေးတယ်ဆိုပဲ
လူအလုပ် လူလုပ်ကြ .. ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီး လုပ်လိမ့်မယ်
လူက ဘုန်းကြီးကို လမ်းညွှန်မှု ပေးတာ မှားသွားရင် လူမှာ အပြစ်ကြီးတယ်
ဘုန်းကြီးမှားတာ ဘုန်းကြီးအပြစ်ပဲ .. လူက ထပ် ပြစ်မှားရင် လူမှာလဲ အပြစ် ဖြစ် (နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်) မဖြစ်တော့ မသိပါ
အဲ .. တကယ့် ဘုန်းကြီးကိုမှ ပြစ်မှားမိရင် အပြစ် သိပ်ကြီးတာ ..
ရဟန္တာ အစစ်ကို အစစ်မှန်း မသိလို့ ပြစ်မှားမိရင် ပိုဆိုးသေး .. အ၀ီစိက ပြန်တက်ဖို့တောင် ခက်လိမ့်မယ်
ဘုန်းကြီးကျင့်ဝတ် မညီတာတွေ များလာတာက
၁။ စားသာလို့ အလုပ်မလုပ်ပဲ စားရလို့ လုပ်တာ (သို့မဟုတ်)
၂။ လာဘ်လာဘ နည်းပါးတဲ့အတွက် များလာအောင် လုပ်တာ
ဘာလေးများ ရမလား လို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ များလို့
အားကိုးလေး ရမလားလို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ များလို့
ကိုးကွယ်တဲ့လူ မရှိရင် ၀ိနည်းတွေ ပြန် ဆင်ခြင်လိမ့်မှာပေါ့
ဒါပေမယ့် ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာကို .. မသိတဲ့ လူတွေ ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးမျိုး ရှိနေဦးမှာပါ
လူက ဘုန်းကြီးကို လမ်းညွှန်မှု ပေးတာ မှားသွားရင် လူမှာ အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာ.. ဘုန်းကြီးတွေက ပြောတာ..ဟောတာတွေပါ..။
လူသားအချင်းချင်း.. မှားနေတာကို.. မှားနေတယ် မပြောရဲအောင် ဖြစ်နေတာကိုက.. မြန်မာထေရ၀ါဒရဲ့ အဓိကပြဿနာလို့ ထင်မိတယ်..။
အခု မဟနကထုတ်တဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာ/မနာ.. လူတွေက ပိုသိမှာမို့.. လူတွေကပဲ.. တိုင်ကြား စာတင်..ကြရမှာပဲ..။
မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်း…. ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးကြစေလိုကြောင်း….။
အင်း သူကြီးပြောတဲ့ မီဒီယာကတော့ လူ့လောကမှာတင်မဟုတ်၊ သံဃာ့လောကကိုတောင်ချင်းနင်းဝင်ရောက်တော့မှာပါကလား။ စ,ခါစတော့ ဟုတ်တာရော မဟုတ်တာတွေရော သတင်းတွေ “မိုးလုံးပြည့်”နေမှာဘဲ။ ရေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ နောင်အခါမှာသတင်းတွေစိစစ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သတင်းမီဒီယာလောကလဲ professional ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အခက်ဆုံက အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဘာသာလို့မပြောယုံတမယ်၊ မသတ်မှတ်ယုံတမယ်ဘဲရှိပါတော့တယ်။ သခင်နုလဲဒါနဲ့ဘဲဒုက္ခ လှလှ တွေ့သွားတာလေ။ ဘာတဲ့…သာဿနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာဿနာရေးဦးစီးဌာန၊ နောက် သာထွန်းပြန့်လို့ခေါ်တဲ့ သာဿနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားးရေးဦးစီးဌာန ဆိုပြီး၊ အမြို့မြို့အနယ်နယ် နဲ့တောင်တန်းဒေသတွေပါမကျန် သာဿနာပြုကျောင်းတွေ တင်မကပါဘူး..”လူ”သာဿနာပြုတွေ ပါလွှတ်ပြီးထောက်ပံ့ကြေးပေးတော့…မောင်မိုးညို ရောက်ရှိတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဒေသဆိုရင် ခရစ်ယန်တွေက နေ့ချင်းညချင်းဘာသာကူးပြီး “ဗုဒ်ခရစ်”တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့တခြားရပေါက်ရလမ်းတွေလဲပါတာကိုး။ ဒါက ဗိူလ်ချူပ်မျိုးညွန့် လက်ထက်ကတည်းကပါ။ အစိုးရရဲ့တာဝန်က မဟန ကထုတ်ပြန်တဲ့ပညတ်ချက်ကို ထပ်ဆင့်ဥပဒေပြဌာန်းချက် နဲ့ လူကျင့်ဝတ်၊ ရဟန်းကျင့်ဝတ်ကို စည်းလဲခြား၊ အာဏာသက်ရောက်မှုလဲရှိအောင်လုပ်ဘို့တာဝန်ပါဘဲ။ အဲ- သာဿနာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့တွေက လိုအပ်တဲ့ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ ကျန်ပစ္စည်း(၄) ပါးကိစ္စကို ပံ့ပိုးပေးဘို့ပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတင်မကပါဘူး၊ ကျန်ဘာသာခြားတွေကိုလဲ တပြေးညီထောက်ပံ့ရပါမယ်။ ခရစ်စမတ်၊ ဒေ၀ါလီ၊ အစ်ပွဲတော် တို့လိုအခန်းအနားတွေ မှာ တက်ေ၇ာက်စားသောက်ပြီးပြန်ယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ အဲ့ဒါမှ- အစိုးရကလုပ်ရမဲ့ ပါဝင်ရမဲ့ အပိုင်းပါ။ ဒါကိုမှ ဓမ္မာစက်၊ အာဏာစက် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခုခါမှ ဒီကိစ္စ တရားဝင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်လာပေမဲ့ ရှိနေတာကတော့ ရာစုများစွာထဲကပါ။
ဒါတွေဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ခေတ်ပျက်ပြီး၊ အစိုးရမင်းတွေရော ပြည်သူတွေမှာ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ခြင်းကြီးမက ပျက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ဒီလိုကိစ္စတွေ ထွန်းကားပါတယ်။ စီးပွားပျက်တော့ ချဲထီခေတ်ထတဲ့သဘောနဲ့အတူတူပါဘဲ။ ဒါမှမလုပ်ရင် လူရာမ၀င်သလို၊ ခေတ်မမှီသလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါ။
အခုသတင်းကိစ္စထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၊ မဟုတ်မဟတ် ဇာတ်လမ်းတွေလဲ ဖုံးထားဖိထားလို့မရတော့ပါဘူး (ထင်ရတာဘဲ)။ ဖြစ်နိုင်ရင် သံဃာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က ကွင်းဆင်းအရေးယူ တာ ၀ိနည်းအရဆောင်ရွက်တာတို့လုပ်နိုင်ရပါမယ်။ လူတွေကြားထဲမှာလဲ ဒီလိုကိစ္စတွေဟာ အထင်သေးစရာ၊ လက်မခံနိုင်စရာ ဆိုတဲ့ အဖြစ်ရောက်တဲ့အထိ အသိပညာပေးရပါမယ်။ ဒါတွေဟာ ဗုဒ္ဓက မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ ဗုဒ္ဓ ကတားမြစ်ထားသမျှကို အိပ်သွန်ဖာမှောက် လုပ်ကြပြီး၊ လုပ်ပါလို့ လမ်းညွှန်ထားတာတွေကိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်သလိုလို၊ မဆိုင်သလိုလို၊ နှာစေးချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာ လူ့သဘာဝဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါပြီ။
MG ရွာသားအပေါင်းကလည်း – ကိုယ့်သာဿနာ၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အဖတ်ပြန်ဆယ်ရေးကိစ္စ (အမှန်အတိုင်းပြောတာမို့ လွန်ရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေါ့နော်) အင်တိုင်အားတိုက် ကွန်မင့်ကြပါလို့…..။
အခု ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေက အလွန်ကောင်းပါတယ်။
၀ိနည်းနဲ့ အညီနေထိုင်ပြီး သာသနာတော် သန့်စင်သွားစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရော ဆိုတဲ့ စကားတခုလိုပေါ့.. ကြွက်ချေး ကောက်ရင်းနဲ့ ဆွမ်းဆန်တွေ ရောမပါသွားပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သတ္တ၀ါ အချင်းချင်း ညှင်းပန်းလိုချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေစည်းကမ်းတွေက နဂိုထဲကရှိတယ်၊ (အင်္ဂလိပ်တွေထုတ်သွားတာ ) လူတွေက မလိုက်နာကြလို့ ပျက်နေတာ။ သံဃာ့စည်းကမ်းများလည် သည်လိုပဲ ယခင်ထဲက ရှိပြီးသားတွေပါ။ သံဃာအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က၊ သံဃာတော်များ ကိုယ်တိုင်မှ တန်ဖိုးမထားရင် နောက်ထပ်ထုတ်လည်း အပိုပါပဲ။။။။
– ဗေဒင်၊ဆေးဝါး၊ လာဘ်လာဘ ကိစ္စတွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ကွက်ကြားမိုး မရွာဖို့လိုပါတယ်။
အထက်ပါ အချက်များကို တပ်အပ်စွတ်စွဲလို့ ခက်ပါမယ်။ အလွဲသုံးသူ အများအပြား ရှိတာသေချာသလို ပုထုဇဉ်များ မသိနိုင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စာနဲ့ မညီတိုင်း မှားတယ် စွတ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ (လုပ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာလည်းရှိလို့) ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးအတွက်နဲ့လေး ဖြစ်နေပါမယ်။
– ကိလေသာတရားနှင့် ၀ိနည်းနှင့် မညီညွတ်သော အကြံအစည် အပြုအမူ ပြုလုပ်ခြင်း။
ဒီအချက်က သိပ်ကျယ်ပြန့်နေလို့ ဘာကိုတိတိကျကျ ရည်ညွှန်းချင်မှန်း မသိပါဘူး။ တကယ်တော့ သံဃာတော် ဖြစ်လာပြီးဆိုကထဲက ကိလေသာနဲအောင် ပြုမူကျင့်ကြံရပါမယ်။ မလိုက်နာလို့ အရေးယူတာထက် မလိုက်နာနိုင်အောင် ဖြစ်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ထုံးတမ်းဓလေ့များကို တိုက်ဖျက်ပေးစေလိုပါတယ်။။။။။
ဘုန်းကြီးစာချ ဓမ္မကထိက ဦးကြောင်ကြီး
ကောင်းတယ်ဗျို. အလို.ဥပဒေထုတ်တာ မြန်မာမီဒီယာတွေကလည်း ကိုသာသနာထွန်းကား သန်.စင်ရေးအတွက် ရေးတာနည်းတယ်လို.ထင်ပါတယ်… ကိုပေါင်ကိုလန်.မထောင်ချင်ကြလို.နဲ.တူတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ိနည်းနဲ.ညီတည်း ရဟန်းသံယာတွေကိုပဲ ဦးတိုက် ရှိခိုးကန်တော.ပြီး ကမဘာအလည်မှာ ဒါငါတိုကိုးကွယ်တည်း သံယာဆိုပြီးပဲ ပြောချင်ပါတယ်… ညဘက် ဦးထုပ်ဆာင်း ဘီယာသောက် အင်တာနက် သုံး ကောင်မလေးတွေနဲ.ချက် …ဓမ္မကထိက လို.လို…..
(ဓမ္မကထိက ဦးကြောင်ကြီး) မပါ အဲလို. ဘုန်းကြီးတွေကို မရှိခိုး မကိုးကွယ်ချင်ပါ…
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ၀ိနည်းဆိုတာ သံဃာအတွက်စည်းလုံးဖို့အတွက် ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ ယနေ့သံဃာ(အဖွဲ့အစည်း)အများစု ဗုဒ္ဓဘုရားချမှတ်ခဲ့တဲ့ ၀ိနည်းတော်တွေကိုလည်း မလိုက်နာကြပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရားလွန်တော်မမူခင် မှာကြားခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခုမှာ ၀ိနည်းကို သံဃာပြင်လိုကပြင်၊ ဖြည့်လိုကဖြည့်ရန် မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် သံဃာလွှတ်တော်ခေါ်ပြီး ခေတ်မမှီသော ၀ိနည်းစည်းကမ်းများကို ဖျက် ခေတ်မှီသော ၀ိနည်းစည်းကမ်းများကို ဖြည့်စွက်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သံဃာတွေ မညီပါဘူး။ မလုပ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓချမှတ်ခဲ့တာဆိုပြီး ဗုဒ္ဓကို ဒိုင်းသဖွယ်ကာဘာလုပ်ပြီး နေနေကြတာပါ။
ဥပမာ တစ်ခုပြောရရင် ဗုဒ္ဓဘုရားသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ၀ိနည်းအရဆိုရင် သံဃာတွေ ငွေ(အသပြာ)အနည်းငယ်ပဲ ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ အဲဒီအနည်းငယ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်ကပင် အနည်းငယ်မျှ ငွေပါ။ ဒီနေ့ ခေတ်အရဆိုရင် လုံးဝအလုပ်မဖြစ်သောငွေပမာဏပါ။ ဒီလို ၀ိနည်းမျိုးကို ဘယ်သံဃာမျှ မလိုက်နာကြပါ။
သံဃာများ ဘော့လုံးပွဲမကြည့်ရ၊ အပြာကားမကြည့်ရ၊ ဆိုင်ကယ်၊ကား ကိုယ်တိုင်မမောင်းရ စသည့်ဖြင့် ခေတ်နှင့်အညီ လိုအပ်သော ၀ိနည်းစည်းကမ်းများကို ဖြည့်စွက်ချမှတ်ဖို့ အထူးလိုပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဖို့ကြ မစည်းလုံးမညီညွတ်ကြပါဘူး။
အမှန်က..မီဒီယာက.. သာသနာရေးကိစ္စ..ပွင့်လင်းမြင်သာေ၇းမယ်ဆို.. … သူတို့က.. အစိုးရအာဏာပိုင်တွေထက်ကြောက်ရတယ်..။
ပြောရရင်.. ကျုပ်မှာ.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကတည်းက.. ဘုန်းကြီးတပါး.. ပညာသင်တဲ့ကလေးတွေ.. အိပ်ယာထဲခေါ်ခေါ်” နှိပ်”နေတာ.. သတင်းရော..ဓါတ်ပုံပါရဖူးပြီး.. မထည့်ရဲဘူး..
အဲ.. ကျယ်ကျယ်တောင် မပြောရဲဘူး..။
There isavery practical and reasonable way of criticizing. That is, we can criticizeaparticular monk or sangha who commit any wrong doing but if we said monks are bad, so and so…, then it won’t beafair and rational criticism.In the body of monks or sangha , there are so many good monk , but like any organization there areafew so called monks who try to exploit the robe and are not those who following the right path of dhamma to be enlightened. We are also not happy when some people criticize our whole community because of the wrong doings of some of its member. Because of facist and nazis we cannot say that the Japanese and Germans are cruel people.
Even we are criticizing the worldly people , we should better criticize their particular action rather than criticizing the person.
*ဇောသန်ရင် ဈာန်ဖြစ်တယ်* ဗျ…
ဖောရှောတော့ရှော့တွေလုပ်မှ အစားချောင်၊ လာဘ်လာဘ
ပေါများမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ဖျက်ထုတ်သင့်နေပီထင်တယ်ဗျာ..။
I like shwemyintin’s comments and agree.Even though it might not be very relevant, we can view the evolution or establishments of Sanghs’s regulation, or wi nee ( please correct Pali and English spelling as necessary) inasame manner as the evolution of English common laws which usually were emerged and enacted as the requirements and demands of circumstances and particular events in history and rarely there wereasingle sangha regulation in wi nee that coming without any background story that cause to regulate the particular article on it.But as SMT mentioned , they were made some 2500 year s ago and some of the regulations might be needed to update to reflect the current situations. I know very little in this subject and would like to invite the some expert people like Sayadaw Nay Min thiri from MG to discuss in details inapost.
မီးမီးတို့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွတဲ့ကိုယ်တော်ကတော့ ညဘက်လက်က သပိတ်ကိုင်လို့– ဘယ်ဘက်လက်က first eleven ကိုင်ထားတယ်– ခါးမှာလဲ ဖုန်းဟန်းကြီးနဲ့ လူကြားေ၇ာက်ရင် ဖုန်းအကျယ်ကြီးဆက်သေးတယ်– မန်ယူအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် မမောမပန်းဘူးပဲ
တချို့ ဘုန်းကြီးကျတော့လည်း … ဒကာ ဒကာမတွေက လေလည်လျှင်တောင် အတိတ်ကောက်ပြီး နှစ်လုံး သုံးလုံး ထိုးတာမှန်နေတော့ …(သူ့ပယောဂမပါပဲ ) အော်တို နာမည်ကြီးသွားတယ် … ။ လာကပ်တဲ့ပစ္စည်းငြင်းရိုးထုံးစံကလည်း မရှိလေတော့ … လူသတင်း လူချင်းဆောင်ပြီး သူ့ခမျာ ချဲဂဏန်းတွက်တဲ့ ကိုယ်တော်ဖြစ်သွားရရှာလေရော … ။
ဒါကို ကျောင်းတိုက်က သိတော့ သူ့ကျောင်း လူတ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ မို့ … အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကို တခြားကျောင်းမှာ သွားနေလို့ နှင်လိုက်လေတယ် … ။ သူ့ ဒကာတွေသိတော့ .. ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးက သူလှူဖွယ်မရလို့ မနာလိုဖြစ်တာလို့ သတင်းလွင့်ပါရော .. နေရင်းထိုင်ရင်း ၀တ်နည်းနဲ့ အညီ နေခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးက … အပုပ်ချခံရတယ် … ကဲ … ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲနော် ။